မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: အချစ်ရေး ၊ မေတ္တာကံ ၊ ဖူးစာဖက်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး
ဒါကြောင့်လည်း ဗေဒင်ပညာမှာ နှစ်လိုမှု အခြေအနေကို ဖော်ပြတဲ့ တနင်္လာဂြိုဟ်ဟာ အချစ်နဲ့ နှီးနွယ် ပတ်သက်လာပါတယ်။ နုညံ့တဲ့ စိတ်ခံစားမှု ၊ တွယ်တာနှောင်ဖွဲ့မှု ၊ ငြိတွယ်မွေ့လျော်မှု အ၀၀ ဟာ တနင်္လာဂြိုဟ်ရဲ့ သင်္ကေတတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ …….. မူလ ဇာတာအရပ်ရပ်မှာ …တနင်္လာဂြိုဟ် အားနဲခြင်း / မကောင်းသော အနေအထား တစ်စုံတစ်ရာ ဖြင့် ရပ်တည်နေခြင်း မျိုး ပါလာခဲ့သူများဟာ အချစ်ရေးမှာ ကံခေမှု ကြုံကြရတတ်ပြီး …၊ အထူးသေချာတာကတော့…..သူဟာ သူဖြတ်သန်းသွားရာ ဘ၀ခရီးမှာ စိတ်နှလုံး မသာမယာ ဖြစ်စရာ ၊ နှစ်လွယ်ဖွယ်ရာမဲ့သော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ရနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်လူရွယ်ဘ၀မှာ အထူးရေပန်းစားတဲ့ ချစ်မှုရေးရာကဏ္ဍမှာ ….အသည်းကွဲခြင်း ဟာလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ကို လက်တွဲဖြုတ်လိုက်လို့ …….၊ လှည့်စားသွားလို့ …..၊ သစ္စာဖောက်သွားလို့…၊ အခြေအနေမပေးတော့လို့……စသည်ဖြင့် …….အသည်းကွဲနိုင်သော အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ …. အဆိုပါ အဆင်မပြေ မှုတွေကို ပေါက်ဖွားဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင် အချို့ ရှိပါတယ်။
အင်္ဂါဂြိုဟ် ဆိုတာက ….သမီးရည်းစား စုံတွဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် …၊ ဇနီးမယားခင်ပွန်းလင်သား ….လင်မယား စုံတွဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ….ဆိုးကျိုးပြုမယ့် အနေအထား ဖြစ်တည်လာပြီဆိုရင် ….လက်သံပြောင်ပြောင် …. ကွာစေကွဲစေ …ခွဲနိုင်လေသော ဂြိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဗေဒင်ဟောပြီး အသက်မွေးနေတဲ့ ….ဗေဒင်ဆရာတော်တော်များ ကိုယ်တိုင် ….ညီညွတ်ရေး ဆိုင်ရာဂြိုဟ်ကို ပြပါဆိုရင် ….စနေလို့ ပြောချင်ပြောကြ ၊ တစ်ချို့က တနင်္လာလို့ ပြောကြ ၊ တစ်ချို့ က ကြာသာပတေးလို့ ဆိုချင်ဆို ….အမျိုးမျိုး ယောင်ဝါးဝါး ယူဆနေကြဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဗေဒင်စတင်လေ့လာခါစ ကျမ်းအမျိုးမျိုး ဖတ်ရှုမှတ်သားခဲ့ရတယ်။ တစ်ချို့ကျမ်းဆို စနေ သည် စည်းရုံးရေးဂြိုဟ် ၊ ညီညွတ်ရေးဂြိုဟ်လို့ အတိအလင်း ဖော်ပြထားတယ်။ လက်တွေ့မှာ တစ်ခြားဆီပါပဲ။
တစ်ကယ့်တစ်ကယ်က ဂြဟကာရက သဘာဝမှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ ညီညွတ်ရေးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖြစ်စေ၊ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်နဲ့ သည်ဘက်ရပ်ကွက်ဖြစ်စေ၊ ဟိုနိုင်ငံနဲ့ သည်နိုင်ငံပဲ ဖြစ်စေ …..ညီညွတ်ဖို့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ အင်အား လိုအပ်ပါတယ်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်အင်အား ပျက်ပြားခဲ့ရင် …..လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လည်း ထိုးကျိတ် သတ်ပုတ်ကြ ရပါတယ်။ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်နဲ့ သည်ဘက်ရပ်ကွက်လည်း ချိန်းရိုက်ကြရပါတယ်။ ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ သည်ဘက်နိုင်ငံလည်း စစ်ကြေငြာရစမြဲ။
အကြောင်းကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ် ဟာ ညီညွတ်ညီညာစေသော ဂြိုဟ် ဖြစ်လို့ပါပဲ။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ .. တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ ….သဘောတူညီမှု ၊ ရည်းစူးချက် ဦးတည်ချက် တူညီစေမှု တွေကို အဓိက ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ သာတူညီမျှ ၀ါဒနဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒဆန်တဲ့ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီကနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ … တရုတ်နိုင်ငံဟာ အင်္ဂါဂြိုဟ်လွှမ်းမိုးထားသော နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နေတာပါ။
စကားစပ်လို့ ထပ်ပြောရရင် ….နောက်ဆုံးတစ်နေ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကျူးကျော်လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ် သွားမှာကလည်း အင်္ဂါဂြိုဟ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့ တရုတ်ပါပဲ။ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်တော်တော်များများ …အင်္ဂါဂြိုဟ် အသွားအလာ ထူးခြားချက်တွေကိုကြည့်ပြီး ဟောကိန်းမျိုးစုံ ထုတ်ကြပေမယ့် …… အင်္ဂါဂြိုဟ် အသွားအလာ ထူးခြားတိုင်း တရုတ်နိုင်ငံကို သတိပြုစောင့်ကြည့်မိဖို့ လိုအပ်မှန်း မရိပ်မိကြပါဘူး။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ စစ်မက်တို့၏ အရှင်သခင် ၊ ကျူးကျော်တတ်သော ၊ စူးစမ်းရှာဖွေ စွန့်စားတတ်သော ဂြိုဟ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေရာအနှံ့ ရောက်ရှိနေကြတာ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။
ထားပါတော့ …ဆောင်းပါးက ချစ်မှုရေးရာ ..၊ ရေးမိတာက နိုင်ငံရေးရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ …..အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ ညီညွတ်စေတတ်သော သဘာဝကိုပါ။
အင်္ဂါဂြိုဟ် အင်အားပျက်ပြားခဲ့ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ မညီညွတ်တော့ပါဘူး။ သဘောချင်း မတူညီကြတော့ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ဖြစ်တည်လာတယ်။ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းတွေ ဆူပူလာစေတယ်။ ရန်ပွဲတွေ၊ အဓိကရုံးတွေ ဖြစ်တည်လာစေတယ်။
ဒီတော့ သာမန် ချစ်သူစုံတွဲ ၊ လင်မယားစုံတွဲ လေးတွေလောက်ကိုတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ်က လက်ဖျားလေးနဲ့တောက်ပြီး ….သွားစမ်း ….သွားစမ်း ဆိုပြီး ခွဲပစ်လို့ရတဲ့အထိ စွမ်းအားကြီးပါတယ်။
ချစ်တဲ့သူ နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကြား ….. သဘောထားကွဲလွဲစေမှုတွေကို အင်္ဂါဂြိုဟ် အားနဲခြင်းက ဖြစ်ပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ …….ခိုင်မြဲလှပါတယ်ဆိုတဲ့ တွဲလက်တွေကို ဖြုတ်စေ၊ ပြုတ်စေနိုင်သော သတ္တိ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှာ ရှိပါလေရဲ့။
ဆပွတ်ဂြိုဟ် ဆိုတာကတော့ ချစ်ခင်မြတ်နိုး နှစ်သစ်မှု ဖြစ်တည်စေတတ်သော သဘာဝရှိသည့်ဂြိုဟ် လုိ့ ဆိုပါစို့။ အထူးသဖြင့် မိမိရဲ့ ဖူးစာဖက် …သို့တည်းမဟုတ် နှစ်သက်မြတ်နိုးရသူ ၊ အိမ်ထောင်ဖက် ၊ ဘ၀ခရီးဖော် …စသည်ဖြင့်တို့ကို ရှာဖွေရာမှာ ….ဆပွတ်ဂြိုဟ်ဟာ အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ ဂြိုဟ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ရာနေ့နံသားသမီး အလိုက် ဆပွတ်ဂြိုဟ်အမျိုးအစား ကွဲပြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တနင်္ဂနွေသားသမီးတစ်ဦးအတွက် ဆပွတ်ဂြိုဟ်ဟာ သောကြာဖြစ်ပေမယ့် …သောကြာသားသမီး တစ်ယောက်အတွက် တော့ ဆပွတ်ဂြိုဟ်ဟာ ဗုဒ္ဓဟူး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့လိုကွဲပြားခြားနားသော ဆပွတ်ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဆိုင်ရာ မဟာဘုတ်ဇာတာခွင်မှာ … ရပ်တည်မှု အနေအထားအရ ချစ်မှုရေးရာ ကဏ္ဍတွေမှာလည်း အကျိုးအပြစ်ကွာခြားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
အောက်ပါ နမူနာဇာတာတစ်စောင်မှာ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ ။
အထက်ပါနမူနာဇာတာမှာ ဆို ….. ကြာသာပတေးသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် သူရဲ့ မူလဆပွတ်ဂြိုဟ်ဟာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်ဟာ …. သူမွေးဖွားရာ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာခွင်မှာ …မရဏမှာ ရပ်တည်ထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။
အထက်ပါအနေအထားမျိုးဟာ …. ဆိုင်ရာဇာတာရှင်အဖို့ ….သူဖြတ်သန်းရာဘ၀ခရီးမှာ … ချစ်မှုရေးရာ ၊ သံယောဇဉ်နှောင်တွယ်မှု တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ….ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပွားလာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသော အနေအထား တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာသာပတေးသားသမီး ရာဇဖွားများ အနေနဲ့ အဆိုပါကံမျိုး ရင်ဆိုင်ကြရပါမယ်။
နောက်ထပ် ဥပမာ ဇာတာတစ်စောင်ကို ဆက်လက်လေ့လာပါမယ်။
အထက်ပါဇာတာမှာတော့……. စနေသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဆပွတ်ဂြိုဟ်ဟာ ကြာသာပတေးဂြိုဟ်ဖြစ်လာပြီး မူလမွေးမဟာဘုတ် ဇာတာခွင်ပေါ်မှာ ရာဇဌာနမှာ ရပ်တည်ထား တာကိုတွေ့ရပါမယ်။ … အဆိုပါအနေအထားကတော့…….ဆိုင်ရာ ဇာတာရှင်ဟာ သူဖြတ်သန်းရာ ဘ၀ခရီးမှာ ချစ်မှုရေးရာ နဲ့ သံယောဇဉ်နှောင်တွယ်မှုတွေကို အ လေးထားတတ်ခြင်း နဲ့ အများအားဖြင့် …ကံကောင်းစေခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အနေအထား တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် …အဆင်းအသွင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ဂုဏ်ဒြပ် အရဖြစ်စေ ..ထင်ရှားသော …လူအများစု နှစ်သက်သဘောကျတတ်သော ဖူးစာဖက်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေတတ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ …..မိမိ ရဲ့ မူလဇာတာမှာ ပါလာသည့် အချင်းအရာ အချက်အလက်များကလည်း …ချစ်မှုရေးရာ ကဏ္ဍတွေမှာ လွှမ်းမိုးထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာကံနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့…….တနင်္လာဂြိုဟ်ရဲ့ အနေအထားက အဓိက ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အတွင်းမိတ်ဂြိုဟ်လို့ ခေါ်တဲ့ ….ဥသာ ၊ စိန်ပန်း ၊ ဒါန်းလှ ၊ ကိုရှာ လင်္ကာအရ ….ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တွေကတော့…….လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ၊ မိသားစုအတွင်း …ရင်းနှီးချစ်ကြည် စည်းလုံးမှု အတိုင်းအတာကို သာ အဓိက ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
တနင်္လာဟာ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာမှာ ……….
ပုတိ ၊ သိုက်၊ ရာဇ ၊ အထွန်း ဌာနတွေမှာ ရပ်တည်ခဲ့ရင် ….သင့်လျော်သော အနေအထား ဖြစ်တည်စေနိုင်ပြီး ၊ အဓိပတိ၊ မရဏ နဲ့ ဘင်္ဂ ဌာနတွေမှာ ရပ်တည်ခဲ့ရင်တော့ … သင့်လျော်မှုနဲပါးစေမယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ….. မွေးနံ ၊ နာမည်အရင်းစာလုံး သို့မဟုတ် နာမည်အဖျားစာလုံးတွေဟာ တနင်္လာနဲ့ ပက္ခမိထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ….ဘ၀မှာ မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ …လိုအပ်တောင့်တ မျှော်လင့်ရမှုတွေ များပြားစေနိုင်ပါတယ်။
ဖူးစာဖက် နဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
တော်တော်များများသော …..သူများအဖို့ ကိုယ့်ဖူးစာဖက် ဘယ်လိုဘယ်ဝါ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သိလို ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော ပညာရပ်များကလည်း …အဆိုပါအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး …ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မဟာဘုတ်ပညာအရ တော့ …အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော ဆပွတ်ဂြိုဟ် ရဲ့ ရပ်တည်မှု အနေအထား ၊ ဆိုင်ရာဇာတာရှင်ရဲ့ နာမည် ၊ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာရဲ့ သဘာဝ စတာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး … အဆင့်ဆင့် ပုံဖော်သုံးသပ်ရပါတယ်။
နတ်ခတ်ဇာတာတွေမှာကတော့ ခုနှစ်တန့်ဘာဝ ၊ ခုနှစ်တန့်ဘာဝသခင်ဂြိုဟ်၊ ဘာရိယာကာရကဂြိုဟ်၊ ခုနှစ်တန့်ဘာဝသခင် စီးနင်းသော န၀င်းသခင်ဂြိုဟ် ၊ ခုနှစ်တန့်ဘာဝကို မြင်သော ၊ ညှပ်သော ၊ စီးနင်းသော ဂြိုဟ်များ အလိုက် ဖူးစာဖက်ကို ဖော်ထုတ်ကြတာ တွေ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေရှည်လက်တွဲနိုင်မှု အနေအထားကိုလည်း ဆယ့်တစ်တန့်ဘာဝကနေ တစ်ဆင့် ထောက်လှမ်း ခန့်မှန်းကြလေ့ရှိပါတယ်။
မဟာဘုတ်ဇာတာမှာတော့ ………….ဆပွတ်ဂြိုဟ်ရပ်တည်မှု အနေအထားကို စတင်လေ့လာရပါတယ်။ အထွန်း ၊ သိုက်၊ ရာဇ ၊ အဓိပတိ ဌာနတွေမှာ ရပ်တည်နေသော ဆပွတ်ဂြိုဟ်တွေဟာ …ဖူးစာဖက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မြင့်မားစေတယ်လို့ ယျေဘုယျမျှ သုံးသပ်နိုင်ပြီး ၊ ဘင်္ဂ ၊ ပုတိ၊ မရဏမှာ ရှိသော ဆပွတ်ဂြိုဟ်တွေကတော့ ….. ဖူးစာဖက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ညှိးမှိန် စေတယ် လို့ … အခြေခံအားဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်ဟာ အလွန်အင်မတန်မှပဲ ယျေဘုယျသဘော ဆန်ပါတယ်။ တစ်ကယ့် တစ်ကယ်က ….ကောင်းတာ ဆိုးတာထက် …ဆပွတ်ဂြိုဟ်(ဖူးစာဖက်ဂြိုဟ်) ဘယ်ဌာနမှာ ရပ်တည်သလဲ ။ ဌာနပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲ ….ဆိုတာကသာ …ဖူးစာဖက်ရဲ့ သဘာဝကို ပုံဖော်ရာမှာ အဓိကကျပါတယ်။
ဆပွတ်ဂြိုဟ်ဟာ အဓိပတိဌာနမှာ ရပ်တည်ခဲ့ရင် …. ၊ ထက်မြက်သူ၊ ငယ်ရွယ်သူ၊ အရည်အသွေးရှိသူ၊ ရန်လိုသူ၊ စိတ်ဆတ်သူ၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊ စူးစမ်းရှာဖွေနေတတ်သောသူ၊ စစ်ဘက် နှင့် သုတေသနနယ်ပယ် တွင် ရပ်တည်နေသောသူ….စသည်ဖြင့် အဓိပတိဌာနရဲ့ ကသစ် အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်ဖြစ်သော အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ များ အနဲနဲ့ အများ လွှမ်းမိုးနေသော ဖူးစာဖက်မျိုးဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဆပွတ်ဂြိုဟ်ဟာ ….မရဏဌာနမှာ ရပ်တည်နေခဲ့ရင်တော့……၊ အများက ဖယ်ကျဉ်ထားသူ၊ လူ့ဂွစာ၊ လူထူးလူဆန်း၊ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲ၊ ဓလေ့ထုံးစံကွဲပြားသူ၊ အသက်များစွာကြီးသူ၊ အပြစ်မကင်းသူ၊ စသဖြင့်သော မရဏဌာနရဲ့ အိမ်ရှင် စနေဂြိုဟ်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ ပါဝင်နေသော ဖူးစာဖက်မျိုး ဖြစ်လာမှာပါ။
မွေးနံ ၊ နာမည်အရင်း/အဖျား စာလုံးများဟာ ဆပွတ်ဂြိုဟ်နဲ့ ပက္ခ မိထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆိုင်ရာ ဇာတာရှင်ရဲ့ ဘ၀မှာ …ချစ်မှုရေးရာ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရစေ တတ်ပါတယ်။ မူလဇာတာအရသာလျှင်မက …ကောဇာ ဇာတာမှာပါ ..ယင်းသို့ ပက္ခမိထားခဲ့မယ် ဆိုရင်….အဆိုပါကာလများမှာ သေချာစွာပဲ ပြဿနာ အချင်းအရာများနဲ့ ကြုံဆုံရစေတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့…….. ကောဇာ ဇာတာအရ ….ပြောင်းလဲဖြစ်တည်လာတဲ့ ဆပွတ်ဂြိုဟ် ရပ်တည်မှု အနေအထားအလိုက် ….. နဖူးစာကံ ရွာလည်တတ်ပုံကို သိရှိထားဖို့လိုပါတယ်။
ကောဇာမဟာဘုတ်ဇာတာမှာ ဆပွတ်ဂြိုဟ် ….သိုက်မှာ ရပ်တည်နေချိန်မျိုးမှာ ….ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ၊ ပွဲလမ်းသဘင် မှာ နွဲပျော်ရင်း ချစ်မှုရေးရာကဏ္ဍ များ ကြုံကြိုက်ရတတ်ပြီး…၊ ဆပွတ်ဂြိုဟ် မရဏမှာ ရပ်တည်နေချိန်မျိုးမှာတော့……. တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့သူနဲ့ မေတ္တာမျှမိတာမျိုး၊ အချိန်လွန်လည်ပတ်မိရာက ….ချစ်မှုရေးရာ ကြုံရတာမျိုး ..စသဖြင့် ကြုံတွေ့ကြရတတ်ပါတယ်။
ပုတိမှာ ဆပွတ်ဂြိုဟ်ရပ်တည်ခဲ့ရင်တော့……. ခရီးသွားရင်းလာရင်း …ကြုံကြိုက်ရတတ်တဲ့
အချစ်ရေး ကဏ္ဍမျိုး ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီး၊ ဘင်္ဂမှာ ဆပွတ်ဂြိုဟ်ရပ်တည်လာခဲ့ရင်တော့…… ချစ်မှုပွေ ရတတ်ချိန်လို့ ဆိုရလောက်အောင် ..အပြောင်းအလဲတွေ၊ ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ တစ်စတစ်စ ဝေးပြီး …သည်တစ်ယောက်နဲ့ တစ်စ တစ်စ နီးလာရတတ်တာမျိုး ကြုံကြိုက်ရတတ်ပါတယ်။ ဆပွတ်ဂြိုဟ် အထွန်းမှာ ရပ်တည်ထားခဲ့ရင် …. ကိုယ့်အပေါ်ဖြည့်ဆည်းနားလည်းပေးမယ့် ချစ်သူမျိုး ပေါ်ပေါက် လာတတ်ပြီး ..ဆပွတ်ဂြိုဟ် အဓိပတိမှာ ရပ်တည်နေခဲ့ချိန်မှာတော့ ချစ်ရေးကြိုက်ရာ ကဏ္ဍများမှာ အပြိုင်အဆိုင် ရန်သူရန်ဘက်မကင်း ဖြစ်လာရတတ်ပါတယ်။
အထက်ပါ တင်ပြချက်တွေကတော့….အကြမ်းအားဖြင့် …ဥပမာ တင်ပြထားတာတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ် အနုစိတ် သဘာဝကို ပြည့်စုံအောင် ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင် အလွန်အင်မတန် ကျယ်ပြန့်ပြီး များမြောင်မယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။
သည်ကဏ္ဍကတော့ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ….၊ ခန့်မှန်းရနက်ရှိုင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်မတူညီကြတဲ့ လူသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ခရီးအတူသွားဖို့ ၊ သို့တည်းမဟုတ် …….နှစ်ကိုယ်တူဘ၀တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အခြေအနေကို ….ဂဏန်းခုနှစ်လုံးထဲနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မဟာဘုတ်ဇာတာခွင်ပေါ်မှာ အဖြေရှာဖို့ ဆိုတာက ပိုမိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
စာရေးသူ လေ့လာခဲ့သလောက် အတွေ့အကြုံတွေကို ပဲ အဓိကအားပြု တင်ပြသွားပါရစေ။
အိမ်ထောင်မှု ရေးရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ……. တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ဟာ နေမိသားစုအဖွဲ့အစည်းမှာ ကနဦးအစ ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂဏန်းစဉ်မှာ ဆိုရင်လည်း ပထမဆုံးဂဏန်းဖြစ်တဲ့ တစ်ဂဏန်းအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးပါတယ်။ တစ်ခု တစ်ကောင် တစ်ယောက် … ၊ တစ်ဖွဲ့ ၊ စသည်ဖြင့် မိမိပိုင်ဆိုင်သော တစ်ကိုယ်ရည်သီးခြား ပိုင်ဆိုင်မှု တွေ အပေါ်မှာလည်း အစိုးရပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း အသိုက်အ၀န်းမှာ …. ဆိုရင် မိမိပိုင် မိမိနှင့် အထူးသက်ဆိုင်သော မိသားစု အဖွဲ့အစည်းကို တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်က ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ဦးဆောင်ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ သုံးနှုန်းရင် ပိုမိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစု ဖွဲ့စည်းရာမှာ တနင်္လာဂြိုဟ်ဟာလည်း နောက်လိုက်နေရာကနေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကတော့ ဦးဆောင် မတည် တည်ထောင်သော အရေးအပါဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့………. အိမ်ထောင်မှုရေးရာကို ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ရာမှာလည်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို အကဲဖြတ် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းဟာ မမှားသော အချက်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။
နောက်ဆောင်းပါးမှာ …….တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် နဲ့ မဟာဘုတ်ဇာတာခွင်အရ အကျိုးအပြစ် သဘာဝ ကွာခြားပုံကို ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားပါမယ်။